Online Burma Library > Main Library > Women > Women's rights
Home > Main Library > Women > Women's rights
Title: Myanmar women’s rights: breaking the silence
Description/subject: "Ever since I was able to speak and became conscious of my own actions, I remember telling my mom that I wished I wereaboy. This wasn’t astonishing because you would always find me as the only girl among the boys, playing games only boys would play. Besides, most of my close friends and playmates were boys. My parents happily allowed this until I started middle school..."
Author/creator: Ei Thandar Myint
Title: Discrimination against women
Title: SPEAKING TRUTH FOR PEACE: WOMEN’S EXPERIENCES OF WAR AND IMPUNITY IN MYANMAR
Description/subject: "Women survivors of conflict and oppression are often haunted by silence and invisibility—both before and after the violations they experience. They are often pushed to the fringesof society—marginalized, perhaps even demonized, and disempowered. The full truth about what happened to them and how it continues to affect their lives is erased or denied—not only by the state, local authorities, and the national elite, but often even by those in their own communities and families. In 2016 and 2017, AJAR in collaboration with local partners conducted participative research with 31 women as part of our ongoing efforts to break the silence and amplify the voices of women survivors in Myanmar. We explored how women experience conflict and state violence, and in its aftermath struggle to survive inasystem where impunity is the norm. Our research provides key lessons on how these women have helped themselves, while largely remaining invisible to those providing aid in conflict and post-conflict settings. In the rush to create peace, authorities want victims of war and repression to vanish and magically transform themselves into ordinary citizens without any specialized support. Marginalized from peace process discussions, women are unable to adequately voice their needs..."
Source/publisher: Asia Justice And Rights, Karen Women’s Organization, Ta’ang Women’s Organization and Vimutti Women Organization via "Progressive Voice"
Alternate URLs: https://progressivevoicemyanmar.org/2018/03/24/speaking-truth-for-peace-womens-experiences-of-war-a...
Title: Violence against women:ahidden public health crisis in Myanmar
Description/subject: "Findings from the Demographic Health Survey (2015-2016) shows how much women and girls (aged 15-49) were subjected to physical and/or sexual violence by their husband or other men. The results of the violence often leave severe physical and psychological health consequences, but these remain unaddressed. Survivors of VAW utilize the health sector more than others, but often not for the abuse itself..."
Author/creator: Aye Thiri Kyaw
Title: Women’s Peacebuilding Strategies Amidst Conflict: Lessons from Myanmar and Ukraine
Description/subject: "Thewomen, peace, and security agenda, fi rst articulated in United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325 in 2000,seeks to elevate the role of women in confl ict management, conflictresolution, and sustainable peace . Theagenda can be promoted invarious ways, including National Action Plans (NAPs) on women,peace, and security . Almost two decades later, however, women remain grossly underrepresented in peacemaking around the world– the latest United Nations (UN) estimates suggest that between 1992 and 2011, fewer than one in twenty signatories to peace agreements and fewer than one in ten negotiators at peace tableswere women . Th is stands in contrast to the evidence that women’s inclusion boosts the probability of an agreement lasting at least twoyears by 20 percent, and the probability of an agreement lasting at least 15 years by more than one-third..."
Author/creator: Roslyn Warren (Research Partnerships Manager, GIWPS) Anna Applebaum (Hillary Rodham Clinton Research Fellow, GIWPS) Holly Fuhrman (Hillary Rodham Clinton Law Fellow, GIWPS) Briana Mawby (Hillary Rodham Clinton Research Fellow, GIWPS)
Source/publisher: Georgetown Institute For Women, Peace and Security via "Progressive Voice"
Alternate URLs: https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2018/01/Womens-Peacebuilding-Strategies-Amid...
Title: "ALL OF MY BODY WAS PAIN” SEXUAL VIOLENCE AGAINST ROHINGYA WOMEN AND GIRLS IN BURMA
Description/subject: "I was held down by six men and raped by five of them. First, they [shot and] killed my brother … then they threw me to the side and one man tore my lungi [sarong], grabbed me by the mouth and held me still. He stuckaknife into my side and kept it there while the men were raping me. That was how they kept me in place. … I was trying to move and [the wound] was bleeding more. They were threatening to shoot me..."
Title: Feminist facts Myanmar can’t afford to ignore
Description/subject: I have spent overadecade working in, on, and with Myanmar. Time spent listening to women talk about their experiences of the many conflicts affecting not just their lives, but the lives of the people who came before them, and the people who will come after them. This is what I’ve learnt. Women are the backbone of their communities. Women are responsible for making sure their families—their children, the children of their sisters and brothers who passed too early, their veteran husbands, their drug-addled sons—survive. And this is getting more difficult as each year passes. The conflict in northern Myanmar has lead to increased poverty: the lands of fleeing families have been confiscated, and markets are hard to reach when checkpoints close the road to all but the wealthy or the connected. Many lose all that they own when they flee. Houses are looted, burned down, taken over by soldiers.
Author/creator: Jenny Hedström
Title: Rape: The Burma Army’s unpunished weapon of war
Description/subject: "In October 2016, amid renewed violence in Rakhine state, it was reported that “dozens” of women had been raped by Burma/Myanmar army soldiers.The story shocked international media and the United Nations Special Representative on Sexual Violence in Conflict called on the Government to conduct an investigation into the alleged incidents. However, the Burma/Myanmar army has long used rape asaweapon of war, especially against Burma’s/Myanmar’s ethnic nationalities. Despite the hundreds of rapes that have been recorded by Burma’s/Myanmar’s NGOs and civil society organizations (CSOs), no member of Burma’s/Myanmar’s government forces has ever been punished for committing rape or sexual violence. This is because under Burma’s/Myanmar’s 2008 Constitution the army gifted itself immunity from the country’s laws, meaning allegations of rape are only investigated internally by the army, if at all..."
Source/publisher: Network for Human Rights Documentation – Burma
Description/subject: (WithaSpecial Focus on the Kawng Kha Case, in Kachin Land)..... Executive Summary: "Despite the so-called democratic transition taking place since 2010, Burma remains constitutionally under the control of the Armed Forces. However, our national democratic icon, democratic forces, some ethnic armed organizations, many NGOs -- especially GONGOs – and most of the international community are siding with or exercisingapolicy of appeasement with the power holders, without scrutinizing whether the source of their power emanates from the genuine will of the various ethnic nationalities and/or indigenous peoples. Asaresult, terms such as human dignity, human value, and particularly human rights have become empty rhetoric. Accountability is merelyapolitical slogan, used by the incumbent President Thein Sein, the chairperson of the Union Solidarity and Development Party (USDP), since coming to office in 2011, but never implemented by any government institution in practice. The vicious circle of impunity continues, and, for the time being, seeking justice is an unpopular concept, voiced only by victims’ communities. Against this background,aheinous crime against two young ethnic Kachin female volunteer teachers was committed on January 19, 2015, allegedly by the Myanmar soldiers of the ruling regime. Despite the fact that it has been almost ten months now, the perpetrators are still at large and no suspect has been identified by the police. Investigations carried out by the authorities have not focused on the victims, but have been one-sided, benefitting the perpetrators. The lack of reparative and restorative justice has led to delay and finallyadenial of justice. The ominous silence around this case will becomeacatalyst for recurrence of gross human rights violations in the future. This preliminary report attempts to uncover the truth about this case, relating it to similar past incidents of war crimes, particularly sexual violence. It is also examined as to whether the state is held accountable for failure to provide protection for such heinous crimes and reparations to the victims, due to official state passivity. The government is also reminded of its obligations under domestic and international law. The victims of rape have commonly been non-Burman ethnic females, such as Shan, Karen, Kachin, Karenni, Palaung, etc. As such, the crimes can be categorized as having an ethnic nature. In many previous cases, even though victims were raped, they were not murdered. And even if they were murdered, they were not tortured. However, the Kawng Kha war crime case highlighted in this preliminary report is quite distinct. The victims were not only raped but also murdered. Worse, it was not an ordinary rape butagang-rape. In addition, the victims were inhumanely and brutally tortured before they were murdered. As of now, nobody knows whether the victims were tortured by the perpetrators before or after being raped. As such, among the gross human rights violations inflicted on the various ethnic nationalities over the past decades, the Kawng Kha case constitutes one of the most heinous crime ever committed. Unfortunately, the ruling regime, albeit having the responsibility as the government, has not yet submitted any report specifically on this case to the Committee against Torture and to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), which Burma has already acceded to. There are no independent institutions or professionals working with victims of sexual violence nor does there exist any effective law for protection of witnesses in Burma. In accordance with the 2008 Constitution of Burma, the Myanmar Armed Forces, led by the Commander-in-Chief – not the State President – primarily exercise executive power. In addition to the Police and other security institutions, the Judiciary is also subservient to the executive. This legal and institutional framework has exacerbated the situation of the victims, their families and their communities, whenever the culprits or suspects are army personnel or government authorities. In regard to sexual violence,aserious problem is that ethnic women victims, given social, geographical, financial and legal constraints, are unable even to file complaints; and, even ifacomplaint is filed, it is commonly rejected by the Judiciary or the local authorities. This paper explores the status of State Institutions, focusing on the Police Institution, from the aspect of institutional integrity as well as procedural justice, as underpinned by not only national laws, international human rights laws and humanitarian law, but also the Rule of Law. This paper also establishes the nexus between civil war and human rights violations and attempts to findareasonable solution. Last, but not least, the role and responsibility of the international community is scrutinized from the perspective of promotion and protection of human rights in connection with the previous and current background scenario of Burma."
Source/publisher: Legal Aid Network (LAN) and Kachin Women’s Association in Thailand (KWAT)
Title: Justice Delayed, Justice Denied တရားမှု ရှာဖို့ နှောင့်နှေးခြင်းမှာ
Description/subject: ခြုံငုံတင်ပြချက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစတင်၍ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူး ပြောင်းမှုဟူ သည့်အောက်၌ နိုင်ငံရေးအာဏာ၏ အခန်းကဏ္ဍအားပို၍ အလေးထားလာကြသည့် သဘောရှိသည်။ ဤတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိလာသည်။ ဒီမိုကရေစီရေး အင်အားစုများ၊ အချို့သော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် (အထူးသဖြင့် အစိုးရနှင့်လက်ဝါးရိုက်၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့်) အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံအတော်များများသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအာဏာ ရရှိထားသူများနှင့် ပူးပေါင်း လက်တွဲရေး၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ဖက်လှဲတကင်း ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရေး မူဝါဒကို ကျင့်သုံးလာကြသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံရေးအာဏာသည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ပေါင်းစုံ၏ စစ်မှန်သော သဘောဆန္ဒကို အခြေပြု၍ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဟုတ်မဟုတ် စစ်ကြောခြင်း မပြုကြတော့။ သို့ဖြင့် နိုင်ငံရေးအာဏာ ကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုပြု၊ ပို၍ပို၍ အလေးထားလာခြင်းမှာ ရှုတ်ထွေးမှုများ ပိုမိုပေါ်ပေါက်လာသည့် အကြောင်းခံ ဖြစ်လာသည်။ ယင်းမှ မကောင်းသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူ့တန်ဖိုး၊ အထူးသဖြင့် လူ့အခွင့် အရေးဟူသော ဝေါဟာရများမှာ အသံသာရှိပြီး အဆန်မရှိသည့် သင်္ကြန်အမြောက်သဖွယ် ဖြစ်လာသည်။ တာဝန်ခံမှု ဟူသည်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတအဖြစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က လှည့်ဖြားပြောဆိုခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးကြွေးကြော်သံ သက်သက်ဖြင့်သာ တည်ရှိလာခဲ့သည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် မည်သည့်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ တခုတလေတွင်မျှ တာဝန်ခံမှုကို ကြီးကြပ်ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးနောက် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရနေသော အခြေအနေသည် ဆုံးသွမ်းသံတရာအနေနှင့် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်အချိန်တွင် တရားမျှတမှု ရှာဖွေရေးဟူသည်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများ အဝန်း အဝိုင်းအတွင်းတွင်သာ ရေရွတ်မြည်တမ်းရမည့် အဆင့်ရှိသည်။ လူထုကြီးတရပ်လုံးအကြားတွင် ရေပန်းမစားလှ တော့ပါ။ ယင်းသို့သော နောက်ခံအခြေအနေများအောက်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့၌ မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သားများက ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ကြီးမားလှသည့်ပြစ်မှုကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျူးလွန်ခံရသူ များမှာ ငယ်ရွယ်နုပျိုသည့် ကချင်အမျိုးသမီး လုပ်အားပေးဆရာမနှစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ပြစ်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေ့မှ စတင်ရေ တွက်လျှင် ၁၀ လ နည်းပါးမျှကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ကျူးလွန်ခဲ့သူများမှာ လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ တရားခံအ စစ်များအား ရဲများကထုတ်ဖော်နိုင် ခြင်းမရှိ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများကို အဓိကထား၍ အမှုကိုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက် ရမည့်အစား ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ အကျိုးဖြစ်စေမည့် တစ်ဖက်သတ်စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများကိုသာ အာဏာပိုင်များက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အပြစ်ပေးရေးနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများ ကုစားခွင့်အပါအဝင် တရားမျှတမှုရစေရေးတို့မှာ စိတ်ကူးယဉ်သဖွယ်ဖြစ်နေဆဲပင်။ တရားမျှတမှုရှာဖွေရေးမှာ သိသာစွာ နှောင့်နှေးကြန့် ကြာနေခြင်းကြောင့် တရားမျှတမှု ငြင်းပယ်ခံရသည့် အခြေအနေမှာ မလွဲသာမရှောင်သာ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်။ ယင်းမှာ အတိတ်နမိတ်မကောင်းလှသော ငြိမ်သက်မှုကြီး ဖြစ်နေခြင်းပင်။ သို့ဖြစ်၍ မဝေးလှသော အနာဂတ် ၌ ပို၍ကြီးမားဆိုးဝါးသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ကြီးများ စဉ်တိုက်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလာတော့မည့် အ ကြောင်းခံ ဖြစ်လာလျက်ရှိသည်။ အတိတ်ကာလက ဖြစ်ပွားခဲ့သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများကို အဓိက ထားလျက် အလားတူ စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ကာ ဤကောင်းခါး ပြစ်မှုကြီးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်စုံတစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ဤအစီရင်ခံစာက ကြိုးစားထားပါသည်။ ဤမျှ ပြင်းထန်ဆိုးဝါး သောပြစ်မှုကြီးများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကာကွယ်မပေးနိုင်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်၏ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပြစ်မှုကြီးများကို မတားဆီးနိုင်သည့်အပြင် ကျူးလွန်ခံရသူများအား ထိုက်သင့်သည့် ကုစားမှုနှင့်လျော်ကြေး ပေးအပ်မှု မပြုခြင်း၊ တို့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်တွင် တာဝန်ရှိမရှိ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဆန်းစစ်ထားသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေတို့အောက်တွင် မည်ကဲ့သို့ တာဝန်များရှိကြောင်းကိုလည်း ထောက်ပြထား သည်။ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသူများမှာ အများဆုံးအားဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများမဟုတ်ကြပါ။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ပလောင် အစရှိသည့် တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြ သည်။ သို့ဖြစ်၍ ယင်းအမှုများအား တိုင်းရင်းသားသဘာဝ ရှိသည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုရှုေ ထာင့်မှ အမျိုးအစား ခွဲနိုင်သည်။ အတိတ်ကာလက မုဒိမ်းမှုကြီးများ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူအများစု ကြီးမှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိ နေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့သော မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခံရသူများမှာ သတ်ဖြတ်ခံ ရသည့်အဆင့်သို့ ရောက်သွားသော်လည်း နှိ ပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံကြရခြင်းတော့မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ကောင်းခါးရာဇဝတ်မှု ကြီးအနေဖြင့် ဤပဏာမအစီရင်ခံစာတွင် ဦးစားပေးဖော်ပြထားသည့် မှုခင်းကြီးမှာ လွန်စွာကွဲပြားခြား နားလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများမှာ မုဒိမ်းကျင့်ခံရရုံသာမက သတ်ဖြတ်ခြင်းလည်းခံ ကြရသည်။ ပို၍ဆိုးသည်မှာ ရိုးရိုးမုဒိမ်းမှုမဟုတ်။ အုပ်စုဖွဲ့၍ပြုကျင့်ခြင်းခံရသည့် မုဒိမ်းမှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့အား မသတ်ဖြတ်မှီတွင် နှိပ်စက်ခြင်းလည်းခံခဲ့ကြရသည်။ သာမန်မျှမဟုတ် လူမဆန်ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်စွာ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများအား မုဒိမ်းမကျင့်မီ နှပ်စက်ညှဉ်းပမ်း မှုပြုသလား၊ မုဒိမ်းကျင့်ပြီးမှ နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှု ပြုသလားဟူသည်ကို ယနေ့ အချိန်ထိ မည်သူမျှမသိရှိ ကြသေးပါ။ သို့ဖြစ်၍ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ချို့အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အသီးသီး အနေဖြင့် ခံစားခဲ့ကြရသည့် တဦးချင်းလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရမှုကြီးများအနက် ကောင်းခါးရာဝတ်မှုကြီးသည် အကြီးမားအပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအားခွဲ ခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူ စာချုပ်အား လက်မှက်ရေးထိုး အတည်ပြုထားသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကောင်းခါးရာဇဝတ်မှုကြီးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိအစိုးရသည် အဆိုပါသက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအား အစီရင်ခံတင်သွင်းခြင်းမပြုသေးပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထူးပြုကာကွယ် ဆောင်ရွက်သည့် လွတ်လပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းသော်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင် သည့် ပညာရှင်များသော်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် မရှိသေးပါ။ အလားတူပင် ယင်းမှုခင်းကြီးများ ဖြစ်ပွားပါက မှန်ကန်စွာထွက်ဆိုမည့် သက်သေများအားထိရောက်စွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဥပဒေများ၊ စီစဉ်ချမှတ်ထားမှုများလည်း မရှိသေးပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အဓိက ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးသူ မှာ သမ္မတမဟုတ်ပါ။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သ ည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ဖြစ်သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အခြားတိုင်း ပြည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အ စည်းများသာမက တရားစီရင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာသည်လည်း စစ်တပ်ကိုအဓိကပြုထားသည့် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များအား ခယဝပ်တွားကြရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြစ်မှုကြီးများတွင် တရားခံများအဖြစ် သံသယရှိခံရသူများမှာ စစ်တပ်မှပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်များ ဖြစ်သောအခါ အဆိုပါဥပဒေပိုင်းနှင့် တိုင်းပြည် အဆောက်အအုံ တည်ရှိမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အနေအထားများသည် ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခံရသူများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၊ သက်ဆိုင်ရာ လူ့အဝန်းအဝိုင်းများ၏ အခြေအနေအား ပို၍ဆိုးဝါးလာစေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း ဖက်ခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးများအတွက် အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေမှာ ၎င်းတို့တွင် လူမှုရေး၊ ပထဝီဝင်၊ ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ မြောက်များစွာ ရှိနေသောကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသော်လည်းတိုင်တန်းနိုင်သည့်အခြေ အနေများ နည်းပါးလှသည်။ တိုင်တန်းခွင့်ရနိုင်ဦးတော့၊ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက (သို့မဟုတ်) တရားစီရင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာက အများဆုံးအားဖြင့် ပယ်ချခဲ့ကြသည်။ ဤအစီရင်ခံစာအနေဖြင့်ပြည်တွင်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေး ဥပဒေများ၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားသည့် ဥပဒေများ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံများကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုလျက် တိုင်းပြည် အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာခြင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်း ရှုထောင့်များမှနေ၍ ချဉ်းကပ်သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုအဓိထားကာ တိုင်းပြည်အဆောက် အအုံများ၏ အနေအထားအား တစုံတရာသော အတိုင်း အတာထိ သုံးသပ်ထားပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်တွင်းစစ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဆက်စပ်ပုံကို သော်လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့အတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဖြေရှင်းမှုကိုသော်လည်းကောင်း ကြိုးပမ်းရှာဖွေ တင်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အတိတ်နှင့် မျက်မှောက် နောက်ခံအခြေ အနေများနှင့် ဆက်စပ်လျက် လူ့အခွင့်အရေးအရ တိုးတက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေး ရှုထောင့်မှနေ၍ နိုင်ငံတကာ၏ တာဝန်ရှိမှုနှင့် အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း ထောက်ပြထားသည်။
Source/publisher: Kachin Women’s Association in Thailand (KWAT)
Title: Cultural Norms, Social Practices and Gender Equality in Myanmar - English, Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: Executive Summary: "Myanmar is giving increasing attention to gender inequality as an impediment to development and the attainment of human rights. In the National Strategic Plan for the Advancement of Women (NSPAW) 2013 – 2022, the Government has signalled its commitment to promoting and protecting the rights of women. There is increasing momentum within civil society networks and organisations to promote programming and advocacy for women’s rights and gender equality. The emerging global recognition of the strong relationship between social norms and women’s and men’s opportunities and actions is also beginning to be discussed in Myanmar, particularly as media is opening up. However, little information is available on this topic. This study was conceived by the Gender Equality Network with the objective of furthering the understanding of social and cultural norms in Myanmar and their impact for men and women in relation to family and community life, work, health and education. By generating an up-to-date mapping of the diverse social and cultural norms atatime of rapid political and economic transition, the study aims to inform programmes and policies about underlying norms that impact on the attainment of gender equality..."
Format/size: pdf (3.88-English; 8.2MB-Burmese)
Alternate URLs: http://www.burmalibrary.org/docs22/GEN-2015-11-Raising_the_Curtain-bu-red.spdf.pdf
Title: Gender Identity and Female Education of Akha National Living in Kengtung Township, Shan State (East), Myanmar
Description/subject: Abstract: "This paper examines the gender identity of Akha national and female education of Akha living in Kengtung Township, Shan State (East), Myanmar with the focus on identities of masculinity and femininity of Akha. In addition, this study intends to elicit the education of the Akha women for gender mainstreaming in formulating development planning in the study areas. Data were collected from three villages; Hwe Yoke1,2 and Naung Hlam in Mong Hkun village tracts, in Kengtung Township, Myanmar by using qualitative methods. IDI(in‐depth interview), KII (key informant interview),IGI(Informal Group Interview) with Akha men and women including informal conversation were employed to get the data. The findings illustrated that politeness, respects, skill at household tasks and field tasks and wearing head‐dress are important for married Akha women. Havingagood management and social dealing with other people are also critical for Akha men. This paper examined that gender identity of Akha are concerned with qualification of Akha man and woman. This identity is closely related to education of female Akha. Local Akha people thought that daughters must do household tasks and field tasks which are important to beagood girls. Their traditional attitudes are influenced on the education of girls because they expected only to beagood housewife in the family. This study showed that the majority of Akha girls and boys finished in the primary level and very few boys can attend in the middle and higher levels. In this case, it is found that socio‐economic condition plays an important role in studying for higher level education. It is evident that these situations are the main causes to limit female’s access to education. With respect to education, gender disparities in schooling were found in the study areas. Akha women need to be educated because women’s empowerment is important for community development in the study areas.".....Paper delivered at the International Conference on Burma/Myanmar Studies: Burma/Myanmar in Transition: Connectivity, Changes and Challenges: University Academic Service Centre (UNISERV), Chiang Mai University, Thailand, 24-­26 July 2015.
Author/creator: Than Pale
Title: Asian Development Bank Interim Country Partnership Strategy: Myanmar, 2012-2014 GENDER ANALYSIS (SUMMARY)
Description/subject: A. Progress and Key Challenges: 1. Myanmar ranks 96 out of 146 countries in the 2011 Gender Inequality Index (GII), ahead of Cambodia and Lao PDR, ranked 99 and 107, respectively. 1 It has achieved gender parity in education with regard to enrollment ratios of girls and boys in primary and secondary education. However, disaggregated analysis points to gender disparities in some of the poorest rural areas.2Women in Myanmar enjoy equal rights in inheritance laws and equal marital property rights in the case of divorce. However, patriarchal cultural values related to women’s roles and responsibilities still shape familial relationships, contribute to the gendered division of labour and limit women’s participation in decision making at all levels. Key issues of concern include: high maternal mortality ratio and insufficient access to reproductive and basic health services; low levels of women’s participation in public decision making and in the labour market, increasing HIV among women and lack of reliable and sex-disaggregated data across all sectors which hampers evidence-based policy and programme interventions. Gender disparities are more marked in rural areas and amongst some ethnic groups...Education...Health...Water and Sanitation...Electricity...Economic empowerment...Public decision-making ["In Myanmar, only 4% of parliamentary seats are held by women..."]...Gender based violence...Institutional Assessment...ADB Gender Strategy...
Author/creator: Asian Development Bank Interim Country Partnership Strategy: Myanmar, 2012-2014 GENDER ANALYSIS (SUMMARY)